DAAWO: Abwaan Yuusuf Shaacir oo si adag uga hadlay Ficilo kasoo horjeeda Dhaqanka iyo Diinta oo lagu arkay Hargeysa.
HARGEYSA(P-TIMES) – Abwaan Yuusuf Shaacir oo kamid ah Abwaanada Soomaaliyeed ayaa shir jaraa`id oo uu maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ee Somaliland, wuxuu si carol eh uga hadlay ficilo uu sheegay in ay ka soo horjeedaan Diinta Islaamka iyo dhaqanka Suuban ee Soomaalida, kuwaas oo uu sheegay in lagu dhex arkay Somaliland.
Abwaan Shaacir ayaa ku dheeraaday arrimaha ku wajahan in xarunta Dhaqanka ee Hargeysa ay casuntay nin u ole-oleeya oo dadaal ugu jira sidii ragga Is fara-xumeeya ay dunida kusoo bataan, kaas oo yimi Somaliland.
Abwaanka ayaa sidaas oo kale tuducyo gabayo koo-kooban ku dul istaagay ficiladaas oo uu sheegay in ay yihiin kuwa halis galainaya bulshada Soomaaliyeed, loona baahan yahay in wax laga qabto.
Wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin ayuu sheegay in uu dhawaan sheegay in Xarunta Dhaqanka Hargeysa ay shaqo wanaagsan bulshada u hayso, wuxuuna wasiirka saxaafadda u mariyey su`aal ku wajahan xarunta keentay dadka u ole-oleynaya in ay raggu is gursadaan dhaqanka ay bulshada barayso.
” Maxamed Kaahin waxaanu leenahay, Xaruntu Dhaqanka ay dhalinyarada barayso bal aan is Weydiino, dhaqankii Qawmu-luudkana way keentaye” Yuusuf Shaacir
Shirka jaraa`id ee Abwaan Yuusuf Shaacir wuxuu ku soo beegmayaa xili dhawaan magaalada Hargeysa mid kamid ah warbaahinta ka howlgashaa ay baahisay muuqaal ku saabsam, gabdho ama Hablo Soomaaliyeed oo Maandooriyaha khaadka isticmaalaya.